Buddhavani | Mahavani | जब कोही व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ उसको चेतनाको अवस्था कस्तो हुन्छ ? | |बुध्दबाणी
Published on 2020-03-11 / बुध्दबाणी
प्रश्न ः जब एउटा राम्रो मान्छे मन खिन्न भएर मृत्यु भयो भने उसको चेतना को अवस्था कस्तो हुन्छ ? के जन्म को दौरान केहि फरक हुन्छ वा उ अचानक अर्को शरीरमा जान्छ ?
उत्तर ः जब कोही व्यक्ति को मृत्यु हुन्छ , तब उसको दिमागलाई उसको कर्मबाट सम्ंभाल्ने हुन्छ। जब तपाई अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ , तसर्थ राम्रो र नराम्रो दुबै प्रकारको कर्म गर्नुहुन्छ। बैकमा बचत खाते खोलेको जस्तै जहां आय तथा व्ययको हिसाब किताब हुन्छ । वर्ष को अंतमा , जब तपाई खाताहरु बन्द गर्नुहुन्छ , तब बाकी पैसाको जाँच गर्नु हुन्छ नि होइन ? तपाईले हेर्नु हुनेछ कि के तपाईसंग व्यय भन्दा अधिक आय छ कि या व्यय भन्दा कम आय छ। यदि व्यय आय भन्दा अधिक छ भने , तब तपाईको दिवालिया हुन्छ । यदि आय व्यय भन्दा अधिक छ भने है, तपाईलाई लाभ हुन्छ।
मृत्युको समयमा पनि यस्तै हुन्छ भनेर सोच्नुस् । जब तपाई अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ भने तपाईले जमा गर्नु भएको कम्मा शेष को हिसाब गरिन्छ र तपाईको दिमागमां हुने परिणामलाई निर्धारित गर्नेछ। यदि तपाईको नराम्रो कर्म तपाईको राम्रो कर्म भन्दा अधिक हुन्छ, तब नराम्रो काम तपाई दिमागलाई अवांछनीय स्थितिमा जाने कारण बनाईदिन्छ, जस्तो कि भोकाएको भूत, डरलाग्दो भूत, नरक वा जनावर मा रहनु। यदि तपाईको राम्रो कर्म तपाईको नराम्रो कर्म भन्दा बढी छ तपाईको राम्रो कर्मले तपाईलाई देवता बना बनाई दिन्छ। देवता वा स्वर्गदूतहरुको पनि धेरै अलग अलग स्तर हुन्छ जो तपाईद्वारा गरिएका राम्रो कर्म को स्तरमा निर्भर गरेको हुन्छ। जति राम्रो कर्म तपाईले गर्नु भएको छ, त्यत्ति नै उच्च स्तरको अस्तित्वमा तपाईको जन्म हुन्छ र उत्तिकै धेरै खुशीको अनुभव हुनेछ ।
तर आखिरकार, जब यो कर्क समाप्त हुन्छ, तो तपाई फेरि फिर्ता आउनु हुनेछ र नया शरीर लिनु हुनेछ। तपाई फेरि एक मनुष्य को रूपमा पुनर्जन्म लिनु हुनेछ र प्रक्रिया फेरी शुरू हुन्छ। किनकी तपाईको शरीरलाई देख्ने, सुन्ने, महसूस गर्ने, स्पर्श गर्ने, आफ्नो शरीर को माध्यमबाट खुशी खोज्न को लागी शरीर को उपयोग गर्ने इच्छा हुन्छ । र खुशी पार्ने प्रक्रियामा, तपाईको केही नराम्रो काम हुनसक्छ । यदि तपाई भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने तपाई यस्तो कुनै व्यक्तिको रुपमा जन्म हुनेछ, जोसंग धेरै भन्दा धेरै संसाधन हुन्छ, धेरैसारै धन हुन्छ , ताकि तपाईलाई नराम्रो काम गर्नु नपरोस्। तपाई अझ राम्रो काम गर्न सक्नु हुनेछ । जब तपाईसंग जरूरत से ज्यादा पैसा हुन्छ, तब तपाई यसलाई अन्य व्यक्तिहरुसंग साझा गर्न सक्नु हुनेछ, तपाई अरुलाई मदद गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईले राम्रो काम गर्नुस । अच्छा काम करें। शरीर को जीवनकाल को अंतमा यही राम्रो कम्म र नराम्रो कम्ममा फेरी संतुलन बनाउँछ। जोसंग अधिक संतुलन हुन्छ वही कर्म फेर मन मा अधिकार जमाउँछ ।
यह चक्र तब तक चलीरहन्छ जब तक आप बुद्धको शिक्षाहरुलाई उपदेशहरुलाई पूरा गर्नु हुन्न जो तपाईलाई सिकाइरहेको छ कि यदि तपाई पुनर्जन्म को यस प्रक्रियालाई रोक्न चाहनु हुन्छ भने तपाईले खुशी पाउन शरीरको उपयोग गर्ने आफ्नो इच्छाबाट छुटकारा लिनु पर्नेहुन्छ । तपाईको इच्छा एउटा प्रेरणा शक्ति हो जसको कारण तपाई अस्तित्वको लोकहरुमा पुनर्जन्म लिनु हुन्छ । यदि तपाईले आफ्ना सारा इच्छाहरुबाट छुटकारा लिन सक्नु हुन्छ भने, तब तपाईको पुनर्जन्म हुनकोलागी आवश्यक तत्वहरु केही हुने छैन । तपाई निर्बाणमा हुनुहुन्छ, जहाँ कोई पुनर्जन्म हुँदैन । निर्बामाण , शांति र आनंद हुन्छ। बेचैनी र आंदोलन को कारण जो तपाईको इच्छाहरु छन् ती मनबाट पूर्णरुपले समाप्त भइसकेको हुन्छ ैं। त्यसैले, मन हर समय शांति र खुश रहीरहन्छ। अब जन्म लिनु पर्ने कुनै जरूरत छैन । अजहं सुकृत अभिजातो द्वारा अंग्रजीमा लिखित लेखको अनुवाद